कान्तिपुर दैनिक - विकिपिडिया
कान्तिपुर दैनिकको लोगो।
प्रकार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका
स्थापित वर्ष १९९३ मा श्याम गोयन्का द्वारा
स्वामित्व कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रा. लि.
मुख्यालय सुविधानगर, काठमाडौँ, नेपाल
प्रकाशक कैलाश सिरोहिया
सम्पादक नारायण वाग्ले
कार्यालयको वेबसाईट www.ekantipur.com
कान्तिपुर दैनिक नेपाली भाषा मा प्रकाशित हुने नेपालको एक दैनिक पत्रिका हो। यो पत्रिकाको मुख्यालय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छ।
१ इतिहास तथा विकासक्रम
२ हालका प्रकाशनहरू
कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पटक प्रकाशन २०४९ साल फागुन ७ गते भएको हो। कान्तिपुर दैनिकको शनिवासरिय परिशिष्टाङ्क कोशेलीको प्रकाशन २०५० साल वैशाख १२बाट भएको हो। कान्तिपुर दैनिक प्रकाशन सुरू भएको आठ वर्षपछि 'शुक्रबारे बालकोसेली' का रूपमा कोपिला आउन थाल्यो। 'कोपिला'को नमुना अङ्क २०५७ फागुन ५मा आयो। 'कोपिला'को पहिलो नियमित अङ्क २०५७ फागुन १९मा आएको हो। 'कोपिला'को संयोजन सुरूमा शाश्वत पराजुलीले गरे। २०६१ वैशाखदेखि राजेश कोइरालाले र हाल । प्रत्येक साताको अन्त्यमा हेल्लो सुक्रबार पनि प्रकाशन हुने गर्छ।
कान्तिपुर रङ्गीन निस्कन थालेको २०५४ पुस १७ गतेदेखि हो। कान्तिपुर १२ पेज भएको २०५६ वैशाख १ (यसअघि ८ पेज निस्कन्थ्यो) देखि हो। कान्तिपुर दैनिकको विराटनगर संस्करण २०५८ जेठ १९बाट सुरू भएको हो। कान्तिपुर दैनिकको सुरूवातदेखि योगेश उपाध्याय सम्पादक थिए। २०५७ साउन ७ देखि उक्त जिम्मेवारी युवराज घिमिरेले लिए। त्यसपछि नारायण वाग्ले सम्पादक बने। २०६५ मा नारायण वाग्लेले कान्तिपुर छोडेपछि २०७५ सम्म सुधीर शर्माले यो जिम्मेवारी सम्हाले। हाल कान्तिपुरको सम्पादक नारायण वाग्ले छन्।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स अन्तर्गत पाँच प्रकाशन छन्। देशका सातै वटा प्रदेशमा पब्लिकेसन्सका क्षेत्रीय कार्यालय छन्। ती सबै प्रदेशबाट यो पत्रिकाका क्षेत्रीय संस्करणहरू एकसाथ छापिन्छन्।
द काठमान्डू पोष्ट का सुरूका सम्पादक योगेश उपाध्याय नै थिए। त्यसपछि श्याम के.सी. अखिलेश उपाध्याय र युवराज घिमिरे हुनुभयो। हाल् हाल पोस्टको सम्पादक अनुप काफ्ले हुनु हुन्छ। 'कान्तिपुर दैनिक' र 'द काठमान्डू पोष्ट'लाई २०६२ वैशाख २१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय आकारको बनाइयो। यो आकार साविकभन्दा सानो हो।
कान्तिपुर साप्ताहिकको प्रकाशन २०५२ जेठ ५मा सुरू भएको हो। सर्वोत्तम प्रकाशन २०५४ (हाल सर्वोत्तम नारी)मा थालिएको हो। साप्ताहिक २४ पेज भएको २०५५ फागुन ७ (त्यसअघि १६ पेज निस्कन्थ्यो)बाट हो। २०५७ मंसिर २ देखि साप्ताहिक र सर्वोत्तमको सम्पादकमा सुवास ढकालको नाम छापिन थालेको हो। सर्वोत्तम नारी मासिकको पहिलो अङ्क २०५९ साल कात्तिकमा आएको हो।
नेपाल पाक्षिकको प्रकाशन २०५७ साउन १५ (हाल साप्ताहिक)मा थालिएको हो। 'नेपाल साप्ताहिक' २०६० चैत २२मा भएको हो। यसका सम्पादकहरू विजय कुमार पाण्डे, तीर्थ कोइराला, सुधीर शर्मा, किशोर नेपाल,प्रशान्त अर्याल र अहिले बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत हुनुहुन्छ।
कान्तिपुर एफएमको प्रसारण २०५५ असोज २८ (हाल २४ घन्टा नै प्रसारण) सुरू भएको हो। त्यसअघि २०५२मा रेडियो नेपालसँग ७ देखि १० बजेसम्म समय किनेर प्रसारण हुन्थ्यो। धनकुटा जिल्लाको भेडेटारबाट एफएम प्रसारण २०५८ वैशाखमा भएको हो।
यस पब्लिकेसन्सका 'कान्तिपुर दैनिक', 'द काठमान्डू पोष्ट', 'साप्ताहिक', 'नेपाल साप्ताहिक' र 'सर्वोत्तम नारी' पाँच प्रकाशन हुन्। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सभित्र 'कान्तिपुर अनलाईन' छ। उक्त अनलाईनलाई अहिले 'इ-कान्तिपुर' भनिन्छ। कान्तिपुर अनलाईन २०५७ वैशाख १मा सुरू भएको हो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका सबै प्रकाशन इन्टरनेटमा उपलब्ध छन्।
हालका प्रकाशनहरू[सम्पादन गर्ने]
द काठमान्डू पोष्ट (दैनिक)
कान्तिपुर गृह पृष्ठ
पढ्न मिल्ने कान्तिपुर दैनिक
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कान्तिपुर_दैनिक&oldid=942727" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०९:१५, ३१ अक्टोबर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।